फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - बमको भाषाशास्त्र
बमको भाषाशास्त्र विमल निभा
मेरो अंग्रेजी भाषा पर्याप्त कमजोर रहेको छ । तथापि मैले सुपरपावर बिग्रब्रदरको बमको भाषा बुझ्न थालेंँ कि के हो ! केही दिन अघि इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानी बमले इराकमा मारिंँदा म पनि घाइते भएको थिएँ । यसको अर्थ मिस्टर प्रेसिडेन्टको ठाडो आदेशमा मेरो टाउकोमाथि बम खसालिएको भन्ने पनि होइन । त्यो दिन म अचानक खुट्टा चिप्लिएर र्भयाङबाट लडेको थिएँ । तर अहिलेको प्रधान सवाल मेरो एकथान घाइते टाउकोको होइन । वस्तुतस् बहुचर्चित एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को हो । झन्डै यही बेला हाम्रो विदेश मन्त्री कमरेड प्रदीप ज्ञवालीले अति उत्फुल्ल मुद्रामा घोषणा गरेका थिए– ‘एमसीसीको कुनै रणनीतिक प्रयोजन रहेको छैन ।’ त्यसो भए यसमा कुनै पनि किसिमका बम आदि समावेश रहेको छैन त कमरेड ? यो बहुतै खुसीको बात भयो । तर एमसीसीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्धित बिगब्रदरको बोलीको टोन त अर्कै रहेको छ नि ! यही सिलसिलामा उसको एम्बेसीको प्रवक्ताले के स्पष्ट गरे भने एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हो । अब हामीले कसको भनाइलाई मान्ने ? मेरो विचारमा त आफ्नै मुलुकका विदेश मन्त्रीको कुरा मान्नु बढियो हुन्छ ।
सुपरपावर बिगब्रदरको इतिहास भनेकै अविच्छिन्न रूपमा बमकै इतिहास हो । र आजसम्मको विश्व इतिहासमा एकमात्र यसलाई नै परमाणु बम पड्काएर जापानका लाखौंलाख नरनारी र ससाना बालकरबालिका निर्दोष ज्यान हरण गर्ने गौरव प्राप्त छ । तर भियतनामको युद्धमा भने बिगब्रदरको बम त्यति कामलाग्ने भएन । त्यस युद्धमा धेरै भियतनामीहरूले बमबाट मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । र अन्ततस् भियतनामी नेता कमरेड हो चि मिन्हको नेतृत्वमा भियतनामका जनताहरूले बिगब्रदरको बमबाट मर्न ठाडै इनकार गरेका थिए । त्यसैले आफ्ना सबै बम बोकेर सुपरपावर बिगब्रदर त्यहाँबाट लुरुलुरु फर्कन बाध्य भएको थियो । र हाल भियतनाममा काम नलागेका तमाम् बमलाई अन्य मुलुकमा काममा लगाइएको छ । तर उसको बम वर्षाउने टेक्निक भने केही परिवर्तित भएको देखिन्छ । हो, अफगानिस्तानको युद्धदेखि बिगब्रदरले बम सँगसँगै राहतको पकेट पनि युद्धक विमानबाट खसाउन थालेको छ । यसको परिणामस्वरुप अफगानिस्तान, सिरिया, इराक, लिबिया आदि मुलुकका जनताले पकेटमा भएको राहतको केक आदि टन्न खाएर आरामसँग बमबाट गर्ने सुविधा पाएको छ ।
कान्तिपुर, ४ माघ ०७६